Times are constantly changing. Probably, the next time you walk intoafast food chain in the United States, you’ll most likely be greeted byasmiling silver-haired senior rather thanahigh school teenager. And this “new” trend is sweeping across the United States, Bloomberg reported.
Bloomberg စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၈၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ သောကြာနေ့
Angela Hayes စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၁၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ စနေနေ့
KOAA5စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၈၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ သောကြာနေ့